Ahoana no hanakanana ny loza ateraky ny firotsahan'i Berlusconi any Italia
Janoary 21, 2022 0 Namaky 2 aho
Sary avy amin'i Mathieu Cugnot, Mpamorona, © Vondrona Eoropeana 2019
Silvio Berlusconi dia mpanao politika italiana ary mpanao politika Praiminisitra Italia tamin'ny governemanta efatra nanomboka tamin'ny 1994-1995, 2001-2006, ary 2008-2011. Tamin'ny fomba nampiasainy ny andrim-panjakana sy ny fahefany, i Berlusconi no mpitarika ara-politika izay nanimba indrindra ny demokrasia liberaly, taorian'i Donald Trump, tany Andrefana. Ary nanitsakitsaka ny foto-keviny izy, hoy i Emanuele Felice, mpanao gazety ao amin'ny Daily Domani.
Raha lany androany izy dia ho lany satria mpitarika roa toa an'i Salvini sy Meloni no satroboninahitry ny demokrasia tsy liberaly an'i Orban, Putin sy Trump. Ny vokatra toy izany dia ho fahafaham-baraka ho an'ny Repoblika Italiana, noho ny antony ara-moraly sy ara-politika ary ara-pitsarana voajanahary. Izany dia hanamarika ny fianjeran'ny andrim-panjakana ambony indrindra sy sarobidy indrindra, avy amin'ny fiarovana fiarovana ho fitaovana mety hisian'ny fikorontanana tsy ara-dalàna eto amin'ny firenentsika, hoy i Felice.
Ankehitriny, mba hahazoana ireo famantarana izay manodidina, dia toa tsy azo inoana ny mety hitranga. Mikiakiaka ny anoloana, misy ny fanavahana, famantarana fa sarotra ny isa. Saingy na dia eo aza izany, mbola manohana azy amin'ny fomba ofisialy ireo mpiara-dia aminy, ankoatra ny fanamavoana ny esoeso (mangataka an'i Berlusconi izy ireo mba "hanafoana ny tahiry voatazona hatramin'izao" taorian'ny fivoriana tao amin'ny trano fonenany).
Zava-misy izay miresaka betsaka momba ny toetran'ny afovoan-kavanana ananantsika any Italia. Manampy fanamafisana momba ny toetran'ny mpitarika toa an'i Matteo Salvini sy Giorgia Meloni izy. Ho fanampin'i Berlusconi tenany, ilay voalohany tokony hahatsapa ny zava-misy fa kosa manery ny firenena amin'ity fitsapana mahamenatra sy mampidi-doza ity, ho antsika rehetra, manoloana izao tontolo izao - ary amin'ny fotoana toy izany.
Ny afovoan-kavanan'i Italia àry dia manamafy fa tena tsy manara-penitra, mitsangatsangana ary tsy mandray andraikitra.
Tsy toy ny any amin'ny firenena hafa any Eoropa Andrefana (angamba ny fampitahana tokana mbola mijoro dia ny any Etazonia, izay takalon'ny Repoblikana an'i Trump).
Ny afovoan-kavia dia tsy maintsy misoroka ny fanaovana fahadisoana mahafaty. Esory i Berlusconi ary fidio anarana hafa afovoany havanana, izay tsy “mizarazara”. Ny vokatra toy izany dia mbola ho fandresena ho an'i Berlusconi sy ho an'ny afovoan-kavanana rehetra, ity afovoany-kavanana ity. Midika izany fa manaiky ny mety hisian'i Berlusconi ho toerana fiaingana amin'ny fifampiraharahana.
Pd sy Cinque Stelle koa dia tsy maintsy misoroka ny fahadisoana mifanohitra amin'izany ary miorim-paka amin'ny fahatezerana. Angamba manolotra kandidà sainam-pirenena, ka manohana ny hevitra momba an'i Italia mizara roa izay ny antoko tsirairay, raha ny marina, dia manan-jo ho ara-dalàna sy handeha amin'ny fifandonana izay mety ho resy.
Ilaina ny fanehoan-kevitra amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny endrika manana laza avo dia avo, tsy azon'ny roa tonta ary afaka miditra amin'ny fidirana na dia eo amin'ireo mpifidy afovoany havanana aza. Olona mahay mandresy tsy manaiky hifampiraharaha amin’ireo izay manohintohina ny andrim-panjakana ambony eto amintsika izy nefa tsy mahafoy tena amin’ny fijoroana ho vavolombelona.
Fanamarihan'ny Mpanoratra: Ny fironana ankapoben'ny ankamaroan'ny mpanao politika sy ny haino aman-jery momba an'Atoa Berlusconi dia heverina ho ratsy.
Hevitry ny mpanoratra ity lahatsoratra ity.
Vaovao bebe kokoa momba an'i Italia
More on: Italia | Eoropa Andrefana | Eoropa
Five Month Ocean Voyage: Italian Adventurer ho tonga any San Diego Italia|
Tsena Isolate Protein-trondro eran-tany - Fanadihadiana amin'ny antsipiriany momba ny fironana lehibe, mpilalao lehibe & fahafahana revolisionera 2030 Eoropa|
Vondrona Fampirantiana Italiana: Miroborobo ny raharaham-barotra ankehitriny Italia|
Firenena ambony indrindra eran-tany manana fepetra miasa tsara indrindra Eoropa|
Mario dia vazaha amin'ny indostrian'ny dia. Niitatra eran-tany ny traikefany nanomboka tamin'ny 1960 rehefa nanomboka nitsidika an'i Japana, Hong Kong ary Thailandy izy tamin'izy 21 taona. Nahita ny fivoaran'ny fizahantany eran-tany i Mario ary nanatri-maso ny famotehana ny fotony/fijoroana vavolombelona tamin'ny lasa tany amin'ny firenena maro manohana ny maoderina/fandrosoana. Nandritra ny 20 taona farany dia nifantoka tany Azia Atsimo Atsinanana ny traikefan'i Mario tamin'ny dia ary tafiditra tao anatin'izany ny Sub Continent Indian. Ny ampahany amin'ny traikefan'i Mario amin'ny asa dia ahitana hetsika marobe amin'ny sehatry ny Aviation Civil izay nifarana taorian'ny fikarakarana ny kik off ho an'ny Malaysia Singapore Airlines any Italia ho Institutor ary nitohy nandritra ny 16 taona tamin'ny andraikitry ny Sales / Marketing Manager Italy ho an'ny Singapore Airlines taorian'ny fisarahan'ny orinasa. ny governemanta roa tamin'ny Oktobra 1972. Ny fahazoan-dàlan'ny mpanao gazety ofisialin'i Mario dia avy amin'ny "Ordre National of Journalists Rome, Italy in 1977".
Vahiny manokana ny Aurora Expeditions tamin'ny dia an'ny Coastal UK
27 no maty, maro no naratra tamin'ny haintrano goavana tao New Delhi
Dia miaraka amin'ny biby fiompy: Fandaharana mitondra biby fiompy amin'ny fiaran-dalamby Amtrak Pacific Surfliner
Previous Ireo mpandeha an-trano dia hitondra ny fanarenana ny fizahantany any Zimbaboe izao
Manaraka Fitsapana klinika vaovao amin'ny marary voan'ny pnemonia COVID-19